Android drivers တွေကို Linux 3.3 kernel မှာထည့်မှာပါ Linux မှ
Android driver ကို Linux 3.3 kernel မှာထည့်သွင်းထားတယ်
Kernel တီထွင်ထုတ်လုပ်သူ Greg Kroah-Hartman သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည် ယာဉ်မောင်း ၏ (controller) အန်းဒရွိုက် ၂၀၁၀ နွေ ဦး ပေါက်ရာသီတွင် Linux kernel 2.6.33 -in ကတည်းကဖယ်ရှားပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲတွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည် Linux kernel 3.3.
အယူအဆမှာ Linux 3.3 သည် patch များမလိုအပ်ဘဲ Android device သို့ boot လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း Android patch အားလုံးသည် main development branch သို့အလိုအလျောက်ရွေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် WakeLock အတွက်ကုဒ်နံပါတ်က Android စက်တွေရဲ့ဘက္ထရီတွေကိုကြာရှည်ခံအောင်ကူညီပေးတယ်။
Linux Foundation ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Linux Foundation ၏ Consumer Electronics group သည် Linaro အုပ်စုနှင့်လွတ်လပ်သော developer များနှင့်အတူ Greg Kroah-Hartman နှင့်အတူဤစီမံကိန်းကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Architecture Group ၏ဥက္ကPresident္ဌ Tim Bird သည်အန်းဒရွိုက်စနစ်များကို Linux kernel တွင်ပေါင်းစပ်ရန်အတွက်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် Android Mailing စီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
ပင်မ Linux ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် Android patch များကိုပေါင်းစပ်ရန်ကူညီလိုသည့် developer များမှာစာရင်းသွင်းနိုင်သည် ဒီ link ကို.
အရင်းအမြစ်: အဆိုပါ H ဖွင့်လှစ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Android driver ကို Linux 3.3 kernel မှာထည့်သွင်းထားတယ်
Linux ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါသလား။ စပ်စုနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောများအတွက်လမ်းညွှန်။
GNOME Shell က ... dash လိုဂန္ထဝင်လောက်ပါပဲ